किन खोसियो ‘जसपा’मा डा. भट्टराईको शीर्ष पद ? « Khabarhub
किन खोसियो ‘जसपा’मा डा. भट्टराईको शीर्ष पद ?
काठमाडौं- नवगठित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्र पहिलो वरियता दावी गर्ने डा.बाबुराम भट्टराईले वरिष्ठ नेतामा चित्त बुझाएका छन् ।
पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव रहने गरी दल दर्ता गरिएको छ । यसअघि डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि अध्यक्ष बनाउने सहमति गरिएको बताइएको थियो । तर, दल दर्ता गर्दा भट्टराईको नाम राखिएको छैन । उनलाई चौथो वरियतामा राखिएको छ । उनी अगाडी दुई अध्यक्ष र अशोक राई रहेका छन् । भट्टराईपछिको बरियतामा राजेन्द्र महतो छन् ।
उनको वरियतालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पनि विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । उनको चौथो वरियताका विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको बेला सहयोगी विश्वदीप पाण्डेले सबै निर्णय सहमतिमै भएको बताएका छन् ।
उनले निर्वाचन आयोगमा आजै पार्टी दर्ता गराउनु पर्ने दवावका कारण अहिले वरिष्ठ नेतामा चित्त बुझाएको र पछि उपयुक्त जिम्मेवारी हुने बताएका छन् ।
पाण्डेको दावी जस्ताको तस्तैः
“बाहिर अनेकन हल्ला चलेकोले प्रष्ट पार्न चाहन्छु । सबै कुरा सहमतिमा भएको छ । धेरै वैचारिक र संगठनात्मक कुराहरुमा छलफल बाँकी रहेको र निर्वाचन आयोगमा आजै पुग्नुपर्ने बाध्यता भएकोले आज २ पार्टीबाट १-१ जना अध्यक्षको नाममा संयुक्त पार्टी दर्ता गरौं, म अहिले सदस्य नै हुन्छु र बाँकी कुरा पार्टीको पहिलो बैठकबाट निर्णय गरौं भनेर बाबुराम भट्टराईले पार्टी एकताको बैठकमा सहजीकरण गर्नुभएको हो । कोही साथीहरु पनि बाहिर चलेका हल्लाहरुबाट भ्रमित हुन जरुरी छैन । बाँकी कुरामा अब छिट्टै बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले सबैलाई चित्तबुझ्दो निर्णय गर्नेछ ।
कुन पदमा बस्ने भन्दा पनि हामीले कस्तो राजनीतिक जग बसाउने भन्ने हो । हामी अरु पुराना चलनचल्तिकै राजनीतिक पार्टीहरुको अर्को अंग हुने हो कि साँच्चै व्यवहारमै वैकल्पिक राजनीतिक संस्कारसहितको पार्टी बनाउने भन्ने बहस हो । नेतृत्वलगायतका अन्य वैचारिक कुरा आउने केन्द्रीय समितिको बैठकबाट सबै मिल्नेछ ।
समाजवादी र राजपाको एकता बाबुराम भट्टराईको एक वर्ष अगाडिदेखिको पहल हो । अहिले उहाँले यो एकतालाई के गर्दा निष्कर्षमा लैजान सकिन्छ त्यही गर्नुभएको हो । छिट्टै बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म सबैले धेर्य गरौं । वैचारिक कुरासहित नेतृत्वको कुरा सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी सेटमै जनता समाजवादी पार्टीले निर्णय गर्नेछ ।”
प्रकाशित मिति : २५ जेठ २०७७, आइतबार १० : ३५ बजे
जुम्ला- जुम्लाको एक मात्र चन्दननाथ नगरपालिका चन्दननाथकाे मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार
बारामा पहिलो महिला वडाध्यक्षमा एमालेकी गुरुङको प्यानल विजयी
बारा – जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका १४ मा नेकपा एमालेकी उम्मेदवार चयन
काठमाडौं- ललितपुरको बालकुमारीमा गएराती मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु भएको छ